MB 2017 Jona - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Jona
Nandritra ny fotoana nijanonanay teo amin'ny lapan'ny seranam-piaramanidina nandritra ny fotoana fohy nandehananay sy i Tammy, dia nahatsikaritra tovolahy iray nipetraka teo amin'ny seza roa aho ary nijerijery ahy matetika. Rehefa afaka minitra vitsivitsy dia nanontany ahy izy hoe: "Azafady kely aho, ianao ve Andriamatoa Joseph Tkach?" Faly izy niresaka tamiko ary nilaza tamiko fa voaroaka tsy ho ela ao amin'ny vondron'olona Sabbatarian izy. Tsy ela dia nitodika tany amin'ny lalàn'Andriamanitra ny resakay - nahita fa tena mahaliana ny tenin'ny kristianina fa azon'ny kristianina omena ny Isiraelita ny lalàna, na dia tsy afaka mitandrina azy io tanteraka aza izy ireo. Niresaka momba ny zava-misy fa ny Isiraely dia tena nanana "vanim-potoana" izay ahitahan'ny olona matetika ny lalàn'Andriamanitra. Nazava taminay fa tsy nahagaga an'ity Andriamanitra ity, satria hainy ny fomba mivoatra.
Nanontany azy aho fa ny lalàna nomena ny Isiraely tamin'ny alàlan'i Mosesy dia manana didy 613. Nanaiky ahy izy fa maro ny tohanana hiankina amin'ny Kristiana ireto didy ireto. Ny sasany milaza fa tokony hitandrina ny didy rehetra satria "avy amin'Andriamanitra" avokoa izy rehetra. Raha marina izany, dia mila manao sorona biby sy manao fehim-bavaka ny Kristianina. Nohamafisiny fa maro ny hevitra momba ny hoe iza amin'ireo didy 613 izay misy fampiharana ara-panahy ankehitriny sy tsy misy. Nanaiky ihany koa izahay fa ny vondrona Sabbatarian isan-karazany no mizara an'io olana io - ny sasany manao famorana; ny sasany mitandrina ny sabata amin'ny fambolena sy ny fety fanao isan-taona; ny sasany dia mandray ny fahafolonkarena voalohany, nefa tsy misy faharoa ary fahatelo; ny sasany anefa, samy telo; ny sasany mitandrina ny sabata, fa tsy ny fety fanao isan-taona; misy ny mahatsikaritra ny volana sy ny anarana masina - ny vondrona tsirairay dia mino fa ny "fonosany" ny fotopampianarany dia marina ara-Baiboly, fa ny an'ny hafa dia tsy. Nomarihiny fa efa niady tamin'ity olana ity izy ary nanary ny fomba taloha hitandremana ny Sabata; na dia eo aza izany dia miahiahy izy fa tsy hihazona azy tsara.
Nahagaga fa nanaiky izy fa diso hevitra ny Sabata maro satria tsy hitan’izy ireo fa ny fiavian’Andriamanitra tao amin’ny nofo (tamin’ny tenan’i Jesosy) dia nanorina ilay antsoin’ny Soratra Masina hoe “Fanekena Vaovao” (Hebreo). 8,6) ary izany dia maneho ny lalàna nomena ny Isiraely ho lany andro (Heb. 8,13). Ireo izay tsy manaiky io fahamarinana fototra io ka mitady ny hanaraka ny fitsipiky ny Lalàn’i Mosesy (izay nampiana 430 taona taorian’ny faneken’Andriamanitra tamin’i Abrahama; jereo ny Gal. 3,17) mba hiainana, aza mampihatra ny finoana kristiana ara-tantara. Mino aho fa nisy fandrosoana teo amin’ny resakay rehefa fantany fa ilay fomba fijery (notazonin’ny Sabata maro) fa isika izao dia “eo anelanelan’ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao” (ny fanekena vaovao dia tsy ho tonga raha tsy amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany). Niombon-kevitra tamiko izy fa Jesosy no tena sorona ho an’ny fahotantsika (Heb. 10,1-3) ary na dia tsy miresaka manokana momba ny fanafoanana ny fisaorana sy ny sorona fanavotana aza ny Testamenta Vaovao, dia nanatanteraka izany koa i Jesosy. Araka ny nampianarin’i Jesosy dia manondro azy mazava tsara ny Soratra Masina ary manatanteraka ny lalàna izy.
Nilaza tamiko ilay tovolahy fa mbola manana fanontaniana momba ny fitandremana ny Sabata izy. Nohazavaiko taminy fa ny fomba fijerin'ny Sabbatarian dia tsy ampy fahatakarana, izany hoe niova ny fampiharana ny lalàna rehefa tonga i Jesosy voalohany. Na dia mbola mitombina aza izany ankehitriny, dia misy fampiharana ara-panahy ankehitriny ny lalàn'Andriamanitra - mieritreritra tanteraka fa nanatanteraka ny lalàna nomena i Isiraely i Kristy; izay mifototra amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'i Kristy sy ny Fanahy Masina ary tonga ao anaty ao anaty - ny fontsika sy ny saintsika. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia miaina ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny maha-tenan'ny tenan'i Kristy antsika. Ohatra: raha voafora amin'ny fanahin'i Kristy ny fontsika, tsy maninona na voafora ara-batana isika.
Ny fahatanterahan’i Kristy ny lalàna dia vokatry ny fankatoavantsika an’Andriamanitra noho ny asany lalina sy mahery kokoa tamin’ny alalan’i Kristy sy ny fiavian’ny Fanahy Masina. Amin’ny maha-Kristianina antsika, ny fankatoavantsika dia avy amin’izay rehetra tao ambadiky ny lalàna, dia ny fo sy ny saina ary ny fikasan’Andriamanitra lehibe. Ekentsika izany ao amin’ny didy vaovaon’i Jesosy manao hoe: “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo.” ( Jaona 1.3,34). Nanome izany didy izany i Jesoa ary niaina araka izany, satria fantany fa Andriamanitra, ao anatin’ny fanompoany sy amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina, dia hanoratra ny lalàny ao am-pontsika, hanatanteraka ny faminanian’i Joela sy Jeremia ary Ezekiela.
Tamin’ny nananganana ny Fanekena Vaovao, izay nanatanteraka sy namarana ny asan’ny Fanekena Taloha, dia nanova ny fifandraisantsika tamin’ny lalàna i Jesosy ary nanavao ny endriky ny fankatoavana izay nekentsika ho olony. Efa nisy hatramin’izay ny lalàn’ny fitiavana, nefa nampiharin’i Jesosy sy nanatanteraka izany. Ny fanekena taloha tamin’ny Isiraely sy ny lalàna mifandraika amin’izany (anisan’izany ny sorona, ny somotraviavy ary ny didy) dia nitaky endrika manokana amin’ny fampiharana ny lalàn’ny fitiavana, indrindra ho an’ny firenen’ny Isiraely. Amin'ny toe-javatra maro, ireo toetra mampiavaka ireo dia efa lany andro. Mbola mitoetra ny fanahin’ny lalàna, fa tsy mila ankatoavina intsony ny fepetra voalazan’ny lalàna voasoratra, izay nanendry endrika fankatoavana manokana.
Tsy nahavita ny tenany ny lalàna; tsy afaka manova ny fo izany; tsy afaka misakana ny tsy fahombiazany izany; tsy afaka miaro amin'ny fakam-panahy; tsy afaka namaritra ny endrika fankatoavana mety ho an'ny fianakaviana tsirairay eto ambonin'ny tany. Hatramin'ny nifaranan'ny asan'i Jesosy teto an-tany sy ny asa nanirian'ny Fanahy Masina dia nisy fomba hafa ahafahantsika maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitiavantsika ny mpiara-belona. Ireo izay nahazo ny Fanahy Masina dia afaka mahazo tsara kokoa ny Tenin'Andriamanitra ary hahatakatra ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fankatoavana azy ireo, satria ny fankatoavana dia noforonina sy nambara tao amin'i Kristy ary nampita taminy tamin'ny alàlan'ny apôstôliny tamin'ny fanomezana azy ho ao anaty boky, fa miantso ny Testamenta Vaovao isika dia voatahiry. Jesosy, Mpisoronabe lehibe antsika dia mampiseho amintsika ny fon'ny Ray ary mandefa antsika ny Fanahy Masina. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia afaka mamaly ny Tenin'Andriamanitra avy amin'ny halalin'ny fontsika isika amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny alàlan'ny Tenin'Andriamanitra sy ny zavatra nataony fa tiany ny manaparitaka ireo fitahiany amin'ny fianakaviana rehetra eto ambonin'ny tany. Mihoatra noho izay rehetra azon'ny lalàna atao, satria mihoatra ny fikasan'Andriamanitra ny tokony hataon'ny lalàna.
Nanaiky ireo fanambarana ireo tovolahy ary avy eo nanontany ny fomba fiantraikan'io fahatakarana io amin'ny Sabata. Nohazavaiko fa ny Sabata dia nanompo ny Isiraelita ho an'ny tanjona maro: mampahatsiahy azy ireo ny famoronana; Nampahatsiahy azy ny nialasanany tany Ejipta; mampahatsiahy azy ireo ny fifandraisan'izy ireo manokana amin'Andriamanitra sy nanomezany fotoana fialan-tsasatra ho an'ny biby sy ny mpanompo ary ny fianakaviana. Raha jerena ny fomba fitondran-tena dia nampahatsiahy ny zanak’Israely ny hampitsahatra azy ireo ny asa ratsiny. Ny fitenenana kristiana dia nanondro ny filàna fitsaharana ara-panahy sy fahatanterahany amin'ny alàlan'ny fiavian'ny Mesia - amin'ny fametrahana ny fahatokisanany ny famonjena azy tsara kokoa noho ny asany. Ny Sabata koa dia tandindona ny fahatanterahan'ny famoronana amin'ny faran'ny taona.
Nampahafantariko azy fa ny ankamaroan'ny Sabbatarians dia toa tsy afaka mamantatra fa ny lalàna nomena ny zanak'Israely tamin'ny alalàn'i Mosesy dia vetivety - izany dia natao ho an'ny fotoana sy toerana iray teo amin'ny tantaran'ny firenen'Israely. Notsipihako fa tsy sarotra ny mahita fa tsy mitombina ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra "mamela ny volombava tsy mendrika" na "mametaka ny zorony efatra amin'ny akanjo". Rehefa tanteraka tamin'i Jesoa ny fikasan'Andriamanitra ho firenena ho olompirenena, dia niresaka tamin'ny olona rehetra izy tamin'ny alàlan'ny teniny sy ny Fanahy Masina. Vokatr'izany dia endrika hanao fankatoavana ny toe-javatra vaovao ny endrika mankatoa an'Andriamanitra.
Raha ny amin’ny Sabata andro fahafito, ny Kristianisma tena izy dia tsy nihetsika handray ny andro fahafito amin’ny herinandro ho antokon’ny fanandroana, toy ny hoe nataon’Andriamanitra ho ambony noho ny hafa ny andro iray amin’ny herinandro. Raha tokony hanokana andro iray fotsiny hanaiky ny fahamasinany Andriamanitra, dia mitoetra ao anatintsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izao Andriamanitra, ka manamasina ny fotoanantsika rehetra. Na dia afaka mivory amin’ny andro rehetra ao anatin’ny herinandro hankalazana ny fanatrehan’Andriamanitra aza isika, dia mivory ho amin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny Alahady ny ankamaroan’ny vondrom-piarahamonina Kristiana, ny andro ahafantarana indrindra fa nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty ka nahatanteraka ny fampanantenana tao amin’ny fanekena taloha. Nanitatra ny lalàna momba ny Sabata (sy ny lafiny rehetra amin’ny Torah) i Jesosy, mihoatra lavitra noho ny fetran’ny fotoana, izay tsy vitan’ny lalàna am-bava. Nampitomboiny mihitsy aza ilay didy hoe “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao” amin’ny hoe “Mifankatiava tahaka ny nitiavako anareo”. Fahatsaran'ny fitiavana tsy mampino izay tsy azo ambara amin'ny didy 613 (na amin'ny 6000 aza!). Ny fahatanterahan’Andriamanitra amim-pahatokiana ny lalàna dia mahatonga an’i Jesosy hifantoka amintsika, fa tsy fehezan-dalàna an-tsoratra. Tsy mifantoka amin’ny andro iray amin’ny herinandro isika; izy no foiben-tsika. Miaina ao isan’andro isika satria izany no fitsaharanay.
Talohan'ny nandehanantsika ny milina tsirairay dia nanaiky fa ny fampiharana ara-panahy ny lalàna sabata dia momba ny fiainana fiainana finoana an'i Kristy - fiainana izay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy amin'ny asa vaovao sy lalina kokoa amin'ny Ny Fanahy Masina ao anatintsika, ovaina avy anaty.
Misaotra mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra izay manadio antsika hatrany an-tampon-tongotra ka hatrany amin'ny tongotra.